Malunga nathi - Tianjin Wodon Nxiba Resistant Material Co., Ltd.
I-Tianjin Wodon Wear Resistant Material Co, Ltd, yinkampani yabucala, ebekwe kwisixeko saseTianjin, isixeko esisezibukweni kumantla e-China.
I-Wodon yenye yezona zinto zikhokelayo kubavelisi beemveliso ezichasene nengxubevange yesinyithi. Iimveliso zayo eziphambili zibandakanya: i-chromium carbide overlay (CCO) yokunxiba iipleyiti, iiflux cored hardfacing welding wire, wear plate plate. Kukho abasebenzi abangaphezu kwama-300 eWodon, kubandakanya iinjineli ezingama-30 zeR & D ezinamava. Ngeli xesha, i-Wodon ikwasebenzisa iingcali ezininzi kunye noonjingalwazi kushishino olunganyangekiyo ukunxiba njengomcebisi wenkampani kubuchwephesha bokuqinisekisa ukomelela kobugcisa kunye namandla emveliso.
Sizinikezele ekuboneleleni ngezisombululo ezinxibayo ezisemgangathweni kunye nezonga iindleko ezizalisekisa ngokupheleleyo iimfuno zabathengi.
Ixhaswe ngobuchule bamalungelo awodwa omenzi wechiza, i-Wodon brand chromium carbide egqume ngaphezulu iipleyiti ezinxibe iye yaba ngummeli weepleyiti zokunxiba ezikumgangatho ophezulu, ezaziwa ngokuqaqamba kwazo kunye nokuchasana nefuthe. Zenziwe phantsi kweeparitha ezilawulwa ngokuqinileyo ngaphakathi kwenkqubo yolawulo lomgangatho.
● Imigca yokuvelisa iipleyiti ezingama-68 (ngaphezulu kweetotshi ezili-10 zewelding)
● Imigca emi-5 yokuvelisa iintambo
● Iiseti ezi-8 zokusika koomatshini bokucoca iplasma
● Iiseti ezisixhenxe zokugoba koomatshini bokugoba
● I-Vickers yobunzima be-tester / i-Laptop i-Rockwell yobunzima be-tester / i-portable ye-hardness tester
● I-Spectro Spectrometer / i-spectrometer ephathekayo
● I-ASTM G65 yevili yerabha eyomileyo yokuvavanywa kwesanti
● Imicroscope yesakhiwo seMetallurgical
Beijing Hanxiang Industry & Trade Co., Ltd yasekwa
Imigca emibini yokuhambisa ucingo e-cored esekwe eFangshan Dist, eBeijing.
Ukwandisa amandla emveliso, simisela iBeijing Hanbo yeWelding Consumables Co, Ltd.
Imigca esibhozo yemveliso yeepleyiti ezinxitywe nge-bimetallic yenziwa kwimveliso
Singene kwintsebenziswano neZiko loPhando ngezoBunjineli beYunivesithi yase-Beijing, iGride State Beijing Power Research Institute kunye ne-Iron and Steel Research Institute.
Tianjin Wodon Nxiba Resistant Material Co., Ltd yasekwa ukuze bandise amandla emveliso ipleyiti. Sakha imigca yokuvelisa iipleyiti ezingama-20 kunye neendlela ezimbini zemveliso yocingo.
Saseka isebe lezorhwebo lamanye amazwe. Iimveliso zithunyelwa kumazwe amaninzi.
Ingeniso yonyaka ifikelele kwi-RMB 9300 0000.00
Ukulungiswa kwakhona kweNkampani iTianjin Wodon yaxabiswa njengeziko lethu lemveliso eliphambili, ukuvelisa ukubekwa kobunzima kwipleyiti enganyangekiyo, iingcingo ezixineneyo kunye nokungena kwiimarike zamanye amazwe. Kwisiqingatha sokuqala sika-2016, ukuhanjiswa kweemveliso zethu akonelanga kwiimfuno zentengiso. Ukwandisa amandla emveliso, sityala imali kwizigidi zeRMB kwaye samisela enye indawo yefektri. Umthamo wemveliso uphindwe kathathu. Ingeniso yonyaka ka-2016 ifikelela kwi-RMB107000000.00
Ukulungiselela iinkonzo ezingcono kubathengi bethu, iofisi yesibini yasekwa eSixeko saseChangsha, eHunan. Ingeniso yonyaka ka-2017 ifikelela kwi-CNY 145,000,000.00 kubandakanya ukuthengisa kumazwe angaphandle isixa se-CNY 13,030,000.00.
IHunan Wodon New Material Co, Ltd yasekwa ukuphucula amandla emveliso.
Ingeniso yoNyaka ye-2018 ifikelela kwi-CNY 169,000,000.00, kubandakanya ukuthengisa kumazwe angaphandle isixa se-CNY 23,350,000.00.
Hebei Wodon New Material Co., Ltd yasekwa ukuphucula amandla emveliso.
Ingeniso yonyaka ka-2017 ifikelela kwi-CNY 200,220,000.00, kubandakanya ukuthengisa kumazwe angaphandle isixa se-CNY 48,700,000.00.